zimbabwe elephants Archives – Nehanda Radio
Nov 24, 2021 26,080
The fear of human and wildlife conflict is now high following revelations that Zimbabwe has exceeded its carrying capacity for elephants with an overpopulation ratio of 55 percent.
Sep 29, 2020 25,207
Nov 11, 2019 23,644
Oct 22, 2019 32,678
Zimbabwe to ‘increase wildlife exports to China’
Jan 6, 2016 244
Aug 25, 2015 230
A Zimbabwean man has been trampled to death by an elephant in the top resort town of Victoria Falls, the authorities announced on Tuesday. The 32-year-old man was a curio seller in the town. The Zimbabwe Parks and Wildlife…
Jul 16, 2015 308
HARARE - The twenty-four elephants the Zimbabwean government sold to a Chinese zoo this month are malnourished and peppered with injuries according to secret pictures published by the National Geographic website.
Jul 7, 2015 276
Zimbabwe has shipped 24 elephant calves to China, in a move that has angered animal rights groups who described the export as "extremely cruel".
Jul 6, 2015 325
At least 20 elephants from Zimbabwe have arrived in China after being flown there from the capital, Harare.
Jan 4, 2015 385
HARARE – A plan by the Zimbabwean authorities to sell baby elephants to foreign buyers has set off a firestorm of debate in the southern African country and among international animal rights activists.